Italy COVID vaccines: Undue priorities prevail | Italy travel news
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Vaksinin'ny COVID any Italia: manjaka ny laharam-pahamehana
Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao momba ny dia any Italia • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
Vaksinin'ny COVID any Italia: manjaka ny laharam-pahamehana
vita vaksiny tanteraka
Mazava ny praiminisitra Mario Draghi rehefa nilaza izy hoe: "Ny faritra sasany dia manao tsinontsinona ny zokiny ho an'ny vondrona izay manana laharam-pahamehana angamba mifototra amin'ny sasany amin'ny tanjaky ny fifanarahana."
Tamin'ny herinandro lasa tany Italia, 2,500 ny maty tamin'ireo 3,000 no olona mihoatra ny 70 taona.
Araka ny tolo-kevitra, omena laharam-pahamehana ny vaksiny ho an'ny olona mihoatra ny 80, mihoatra ny 70, ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpampianatra, ny mpampihatra lalàna ary ny marefo.
Toa misy lesoka lohan-danja amin'ny sokajy mitondra ny lohateny hoe "hafa."
Ny fitarainan'ny praiminisitra izay natao ny alarobia lasa teo tany amin'i Domani isan'andro isan'andro, na izany aza, dia tsy nitondra fanapahan-kevitra. Saingy tena matotra ny toe-draharaha ary mitaky fihodinan'ny familiana eo noho eo: ny ora very rehetra mahakasika ny vaksinin'ny COVID any Italia dia hahafaty olona.
Nandritra ny herinandro lasa, dia nisy 7 maty mponina iray tapitrisa raha ampitahaina amin'ny 4 any Frantsa sy Etazonia ary 2.5 any Alemana sy Great Britain. Farafahakeliny 2,500 amin'ireo maty 3,000 tamin'ny herinandro lasa dia mihoatra ny 70.
Izy ireo ihany no sokajy tena atahorana. Saingy amin'ireo italiana 10.7 tapitrisa izay mihoatra ny 70, mihoatra ny 8 tapitrisa no mbola tsy nahita fatra ny vaksininy. Iray tapitrisa (iray amin'ny 10) ihany no nahazo ny fatra faharoa. Ny vaksinim-panafody sahaza ny zokiolona (Pfizer sy Moderna) dia nahazo fatra 3.6 tapitrisa tamin'ny 7.2 natsindrona.
Ankehitriny, vehivavy sy lehilahy an-jatony maro no mety ho faty izay noheverina ho voalohany nefa mbola tsy vita vaksiny. Mampalahelo fa marina ny lazain'ny governora rehefa nilaza izy ireo fa nanaiky ny governemanta.
Ny tolo-kevitry ny 24 martsa dia misy ity foto-kevitra momba ny laharam-pahamehana ity - mihoatra ny 80, mihoatra ny 70, mpiasan'ny fahasalamana, mpampianatra, mpampihatra lalàna, ny marefo, vahinin'ny RSA- ireo dia laharam-pahamehana avokoa.
Na dia mitanisa ny zokiolona aza ny laharam-pahamehana, mandritra izany fotoana izany dia nanome alalana ny faritra hamorona torolalana ho azy ireo ny governemanta. Amin'ny fisehoana rehetra, dia toa ireo izay nalahatra teo aloha dia "vondrona misy fifampiraharahana."
Taorian'ny fipoahan'ny Draghi tao amin'ny parlemanta, vao mainka niharatsy izany. Tao anatin'ny efa-andro farany, ny Tuscany an'i Eugenio Giani (filohan'ny faritra Tuscany) tsy mahomby dia nanome ny antsasaky ny fatran'ny vaksinin'ny sokajy tsy fantatra antsoina hoe "hafa" - tena sarotra ny mamaritra fa aleon'i Palazzo Chigi ny manafoana azy amin'ny statistika avoakany.
Noho izany, nisy vaksinina 1.2 tapitrisa izay, na dia voalaza fa ofisialy aza dia tsy misy mahalala izay nomena azy ireo. Ny fantatra dia tao anatin'ny 4 andro lasa, Campania dia nanokana 40,000 tamin'ireo fatra 76,000 nampidirina ho an'ny sokajy "hafa".
Ity tranga iray manontolo ity dia tsy famoizana ain'olona an-jatony fotsiny, fa ambonin'izany rehetra izany dia nahemorin'izy ireo ny fivoahana avy amin'ny vonjy taitra (ao anatin'izany ny toekarena) izay, amin'ny alàlan'ny fanomezana ho lohalaharana ny zokiolona, ​​dia efa afaka jerena.
Raha tokony handray anjara amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fisokafan'ny trano fisakafoanana sy ny sekoly izy ireo dia tokony handray andraikitra ireo izay nomena fahefana hitantana ny drafi-vaksiny.